Kiraro: ny trano fandraisam-bahiny tokana misy kintana 5 eto an-tany dia misy resort
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Kiraro: ny trano fandraisam-bahiny tokana misy kintana 5 eto an-tany dia misy resort
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Curacao • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Sandals Resorts and Beaches dia manolotra fonosana lafo vidy 5-kintana feno indrindra eto an-tany izay ahafahan'ny vahiny mankafy torapasika fasika fotsy tsara tarehy, fisakafoanana Global Gourmet ™, trano be dia be, zava-pisotro misy alkaola tsy voafetra, fanatanjahantena anaty rano mahafinaritra ary maro hafa.
Rehefa milaza ny Sandals Resorts fa misy ifandraisany amin'ny rehetra, dia midika ho fampidirana an-tsokosoko amin'ny fomba rehetra eritreretina sy amin'ny endrika kintana 5.
Tsy misy fiampangana miafina na tsy ampoizina, ary ny zavatra niainan'ny vahiny dia tsara sy lehibe mihoatra ny antenaina.
Manomboka amin'ny minitra iray miala ny fiaramanidina ny vahiny, dia karakaraina daholo ny rehetra manomboka amin'ny famindrana ny seranam-piaramanidina ka hatrany amin'ny toro-hevitra - hatramin'ny fiandohan'ny fialan-tsasatra ka hatramin'ny fotoana hidiran'ny vahiny fiaramanidina hody.
Ny tena marina dia misy fiampangana hafa antsoina hoe all-inclusives - toy ny hetra avy amin'ny governemanta, ny famindrana seranam-piaramanidina, toaka premium, hetsika fanavaozana, fisakafoanana manokana ary tendrena. Raha miresaka momba ny fametahana dia ity misy toro-hevitra. Tsy hitranga mihitsy izany amin'ny Sandals, satria tafiditra ao daholo ny zava-drehetra, tsy misy fiampangana miafina ary tsy misy tsy ampoizina, afa-tsy ireo zavatra mahavariana ampidiriny ao - toy ny rendrarendra misy kintana 5 marina.
Ao anaty ranomasina
Ny kapa dia izao tontolo izao ihany Tafiditra amin'ny trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 izay misy mandrakariva ny fampidirana azy rehetra. Ny kapa dia manome ny vahiny fampidirina amina kalitao betsaka kokoa noho ny any amin'ny trano fandraisam-bahiny hafa eto an-tany. Ohatra, ny Sandals dia misy ny safidy betsaka indrindra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano - eny fa na dia ny maotera aza - tafiditra ao anatin'izany avokoa, ao anatin'izany ny fampianarana. Ny Sandal ihany no misy ny antsitrika isan’andro ary ny koba scuba matihanina, ny mpitari-dalana matihanina, ny sambo milomano any Newton, ary ny toerana fisitrihana tsara indrindra any Karaiba.
Any an-tanety, i Sandals dia misy fanatanjahantena midadasika indrindra toy ny golf miaraka amina sarany maintso maimaimpoana - manodidina sy tsy misy fihodinana. Tsy misy fampidirana an-tsehatra hafa rehetra izay manana taranja golf izay namboarin'i Greg Norman.
Ahoana izany suite
Raha mankany amin'ny toeram-ponenana, tsy misy fenitra momba ny suite Sandals, manolotra suite be dia be toy ny Skypool Suites, Swim-Up Suites, Millionaire Suites, Rondoval Suites any amin'ny manodidina, Villas Over-the-Water, ary Bungalow eny ambonin'ny rano. Ary ny Sandals ihany no mampiditra mpivaro-tena ao amin'ny akany fitiavana Butler Suites.
Ny zava-pisotro misy alikaola rehetra dia tafiditra ao anaty fotoana rehetra - tsy mila miandry ora iray mahafaly tokana amin'ny andro. Misy bara hatramin'ny 11 isaky ny toeram-pilalaovana tsy misy kiheba ary tsy misy fetra. Ao amin'ny Sandals, ny vahiny dia afaka mankafy divay divay tsy misy fetra an'i Robert Mondavi Twin Oaks.
Ny fisakafoanana manokana any Sandals dia, mpahay manokana. Ny kapa dia misy fisakafoanana gourmet maneran-tany tsy misy fetra na oviana na oviana amin'ny trano fisakafoanana manokana miisa 5 isaky ny trano fandraisam-bahiny. Ny trano fisakafoanana tsirairay dia misy mpahandro kilasy an'izao tontolo izao amin'ny alalàn'ny fambolena farany fambolena sy latabatra.
Ny fonosana fialan-tsasatra rehetra an'ny Sandals dia misy:
Mihinàna + Misotro
Misakafo gourmet misy kintana 5 hatramin'ny 16 trano fisakafoanana isaky ny toeram-pialofana
Sakafo maraina, atoandro, sakafo hariva ary tsakitsaky amin'ny fotoana rehetra
manam-petra toaka premium
Mahatratra 11 bar isaky ny toeram-pialofana
Bara feno entana isaky ny efitrano
Robert Mondavi Twin Oaks tsy voafetra® divay
PADI-voamarina scuba diving (sy ny fitaovana rehetra)
Fitsangatsanganana snorkeling (sy ny fitaovana rehetra)
Saka Hobie, tabilao, kayak
Fampianarana matihanina amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano
Private nosy ivelany ao amin'ny Sandals Royal Caribbean ary Sandals Royal Bahamian
Sarany maintso ao amin'ny anay Golf fampianarana any amin'ny trano fandraisam-bahiny voafantina
Volley volavolan-dranomasina, baskety, latabatra pisinina
Tenisy andro sy alina
Fitness center miaraka amin'ny fitaovana manara-penitra
Andro sy alina fialam-boly anisan'izany ny seho mivantana
maotera fanatanjahantena rano any amin'ny trano fandraisam-bahiny voafantina
Exclusive Tombontsoa fifanakalozana eo anelanelan'ny resort
TSY MISY AHIAHY
Torohevitra sy haba ary gratuities rehetra
Toeram-pandraisana fahatongavana an-tseranana manokana any Jamaika sy Saint Lucia
Ny trano fandraisam-bahinin'ny Sandals rehetra dia an'ny olon-dehibe ihany, natao ho an'ny mpifankatia am-pitiavana
WiFi maimaim-poana (ao amin'ny efitrano sy ny faritra iraisana rehetra)
Fanambadiana maimaim-poana (ho an'ny fijanonana 3 alina na mihoatra)
Personal Serivisy ary ny famindrana manokana any amin'ny ankamaroan'ny suite ambony